Ny bilaogy Kiorda-ny vaovao farany 3 herinandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 3:09 GMT
Nanadino kely ny adidiko aho hitodika aminao ry namana mpamaky Global Voices, noho ny tsy fandefasako lahatsoratra momba ny tontolon'ny bilaogy Kiorda nandritra ny telo herinandro. Androany aho dia hiezaka ny hisintona anao amin'ny zava-mitranga amin'ny Kiorda amin'ity taona vaovao ity. Ny antony nahatonga ahy tsy nandefa lahatsoratra dia, avelao lazaina fotsiny hoe tena asa mafy tsy araka ny fiheverako azy ny fikarakarana mariazy.
Ho an'ny fahasalamana ara-tsaina ho ahy, handeha hijery bilaogy tsikelikely isika fa tsy lohahevitra. Ankoatra ny fiarahabana taombaovao, dia manana lahatsoratra roa hafa mahaliana ny The Kurdistan Bloggers Union: Ny iray, momba ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao ny gripam-borona sy ny tsaho ady an-trano ao Iraka, ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity dia maneho bebe kokoa ny olana resahana ao amin'ny lahatsoratra ôrizinaly; Ny lahatsoratra faharoa (izay nosoratako) dia momba ny takariva iray niarahana tamin'ny Masoivohon'i Etazonia teo aloha Joe Wilson sy ny fanehoan-keviny momba ny Afovoany Atsinanana.
Land of the Sun:Kurdistan manana lahatsoratra momba ny Van Cat malaza, raha vao mahita ny sarin'ity saka miavaka ity ianao, dia azoko antoka fa ho tsaroanao ny nahita izany tamin'ny toerana maro.
Niverina i Sami avy ao amin'ny Iraqi Thoughts ary nanome antsika ny fahatsapany ny fifidianana ny volana Desambra tany Iràka:
Ny mampalahelo ahy dia ao am-poko, fantatro fa ny olona tsara indrindra afaka manova an'i Iràka dia tsy malaza any Iraka ary ny mbola mitoetra ao anaty lisitra marobe ny olana.
Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes manoratra momba ny ny sekoly Tiorka any Avaratr'i Irak / / atsimon'i Kurdistan, ary ny fanantenany ho amin'ny governemanta tsy dia tia kolikoly any atsimon'i Kurdistan. Manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny tanàna Kiorda tsy mifoka sigara koa izy.
Pearls of Iraq manana ohabolana Kiorda, fizarana voalohany sy fizarahana faharoa. Manohy manome antsika fanavaozam-baovao isan-kerinandro mikasika ny ezaka fanarenana ao Atsimon'i Kurdistan ihany koa izy, anisan'izany ny fizarahana faharoa, fizarana fahatelo, sy ny vaovao farany isan-kerinandro amin'ity herinandro ity.
From Holland to Kurdistan manoratra momba ny maha-zava-dehibe ny fiampangana vao haingana an'ilay mpandraharaha Holandey Van Anraat:
Hiriaria ireo mpamatsy fitaovam-piadiana mahafaty indrindra. Frans van Anraat irery no meloka. Na eo aza izany; dia nanamafy ny fitsarana fa mety hiatrika fitsarana ihany koa ireo olona hafa ahiahiana nanome vokatra simika ho an'i Saddam. Zavatra tsy arako tamin'ny vaovao avy amini'reo sampam-baovao.
Imbetsaka ihany koa i Vladimir no nandefa momba ny gripam-borona ao avaratr'i Kiordistana sy ny tsy fitantanan'ny minisitry ny fahalasamana Tiorka ny toe-javatra sy mamela izany hitombo be. Lahatsoratra hafa no ahitana siondresaka momba ny sarimihetsika iray natao momba an'i Mustafa Barzani sy ny toerana fikarakarana hoditra anà lehilahy Kiorda ao Atsimon'i Kiordistana.
Roj Bash manana lahatsoratra manintona milaza antsipirihany ny fiarovana ao amin'ny Oniversiten'i Sorbonne, Paris, momba ny fandalinan'i Saywan Barzani ny siansa politika: The Iraqi Kurdistan Question, 1991-2005.
Hitako fa tsy afaka hilaza betsaka momba ny asa ataon'ny Save Roj TV ary mamporisika fotsiny aho fa hametraka ity bilaogy ity ho ao anatin'ny lisitry ny vakiteninao isan'andro.
Raha te-hahafantatra momba ireo vaovao farany momba ny gripam-borona ao Torkia sy Kurdistan Avaratra ianao, dia Rasti no toerana tokony handehanana, satria manana lahatsoratra marobe amin'ity lohahevitra ity izy, tsy hampifandray azy rehetra afa-tsy ny pejiny fandraisana aho. Mazava ho azy fa tsy ny gripam-borona ihany no nosoratan'i Rasti, fa manana lahatsoratra tsara momba ny fahatsiarovana ny mofo Kiorda sy ny filazana diso nataon'ny jiolahy Kiorda izy.
Farany amin'ity tantara fohy soratako ity ny fampahatsiahivana fa amin'ity lahatsoratra isan-kerinandro ity, miezaka ny handrakotra izay voasoratra ao amin'ny bilaogy Kiorda amin'ny teny anglisy aho, saingy mikasa hanaraka ireo bilaogy Kiorda amin'ny teny rehetra ny tetikasako hafa Kurdistan Blog Count. Raha liana ianao dia misy ihany koa ny Kurdish Blogs Aggregator izay nohavaozina tsy tapaka amin'ny bilaogy Kiorda vaovao hita.